Kitra vehivavy-COSAFA Cup 2018 Hifandona amin’i Malawi i Madagasikara anio
Hiditra amin’ny andro faharoa ny fifanintsanam-bondrona amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika Atsinanana amin’ny baolina kitra sokajy vehivavy na COSAFA Cup 2018 (vehivavy), izay tanterahina ao Afrika Atsimo.
Ho an’ny Vondrona A misy an’i Afrika Atsimo, Botswana, Madagasikara ary Malawi dia hihaona i Malawi sy i Madagasikara anio. Tamin’ny lalao voalohany natrehiny dia resy an’isa 2 no ho 1 nanoloana an’i Afrika Atsimo ny Barea. Voafidy ho mpilalao nisongadina nandritra ny lalao na izany aza ny mpiandry haraton’ny Barea, Andrianandrasana Verosantatra Diana. Miisa 12 ny ekipam-pirenena mifaninana amin’ity COSAFA Cup 2018 ity handimby toerana an’i Afrika Atsimo tompondaka farany. Mitsinjara amina vondrona telo izy ireo.